छोरासंग बाइकको पछाडी बसेर गइरहेको बेला महिलालाई बाघले झम्टेर लग्यो, ‘छोरा मलाई बचाउ’ भन्ने आवाज नै अन्तिम बन्यो – नेपाली सूर्य
छोरासंग बाइकको पछाडी बसेर गइरहेको बेला महिलालाई बाघले झम्टेर लग्यो, ‘छोरा मलाई बचाउ’ भन्ने आवाज नै अन्तिम बन्यो
January 3, 2021 Nepali SuryaLeaveaComment on छोरासंग बाइकको पछाडी बसेर गइरहेको बेला महिलालाई बाघले झम्टेर लग्यो, ‘छोरा मलाई बचाउ’ भन्ने आवाज नै अन्तिम बन्यो
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कुँवाभार नजिक गएराति मोटरसाएकलमा सवार महिलालाई बाघले झम्टेर लगेको छ । कैलाली लम्किचुहा नगरपालिका ४ की ५० नन्दकला थापालाई छोरासंग बाइकको पछाडी बसेर गइरहेको बेला बाघले आ क्रमण गरेको हो ।
बाघले आ क्रमण गरेको खबर पाए लगत्तै निकुञ्जको टोली र नेपाली सेनाले हात्तीको सहायताबाट बेपत्ता भएकी महिलाको खोजी गर्ने क्रममा निकुञ्जभित्र कुवाँभार नजिक शव फेला पारेको छ । महिलाको शव आ क्रमण गरेको स्थान देखि पांच सय मिटर टाढा गुम्ना पुल नजिकै फेला परेको हो ।
मोटरसाइकलमा सवार आमाछोरा कैलाली लम्किचुहा नगरपालिका ४ आफ्नो घर तर्फ जाँदै गर्दा शुक्रबार राति साढे ८ बजेतिर बाघको आ क्रमणमा परेका थिए । छोरालाई भने सामान्य चोट मात्र लागेको छ । बाघले झम्टेर महिलालाई जंगलतिर लादै गर्दा ‘छोरा मलाई बचाउ’ भनेर गुहार मागेको आमाको अन्तिम वाक्य सुनेको छोरा बताउछन ।
नासाले दियो चेतावनीः भोली विनाशकारी छुद्रग्रह पृथ्वीसँग ठोक्किने !
सरकारलाई गुरुङले संकेत गर्दै भने : किताबको भारी बोक्दैमा गधा विद्वान बन्दैन तर बिडम्बना ! गधाको उपदेश सुनेर ताली बजाउने मेरो देश !
May 19, 2020 May 19, 2020 Nepali Surya
लकडाउनको बेला खसीको मासु प्रतिकिलो पन्ध्र सयमा बिक्री गर्ने व्यपारिलाई दुई लाख जरिवाना
April 26, 2020 April 26, 2020 Nepali Surya
वैशाख २५ गते साँझ ७ बजे दीप प्रज्वलन गर्न सरकारको आह्वान